Mpaminany lehibe - Wikipedia
Ny mpaminany lehibe, araka ny fanasokajiana kristiana, dia ireo mpaminany ao amin'ny Baiboly izay nanoratra bokim-paminaniana lava kokoa noho ny maro sy ny boky nosoratany, ka ireto avy izy ireo: ny Bokin'i Isaia (na Izaia), ny Bokin'i Jeremia, ny Bokin'i Ezekiela, ny Bokin'i Daniela (na Daniely) ary ny Bokin'ny Fitomaniana izay ampian'ny Bokin'i Baroka.ao amin'ny Baiboly katolika sy ny Baiboly ortodoksa. Tsy afangaro amin'ireo atao hoe "mpaminany taloha" araka ny fanasokajiana ny boky ao amin'ny Baiboly hebreo (Tanakh) izy ireo. Ny bokin'ny mpaminany sisa rehetra sy ny olona heverin'ny lovantsofina fa nanoratra azy ireo kosa dia atao hoe mpaminany madinika.
1 Bokin'i Isaia sy i Isaia
2 Bokin'i Jeremia sy i Jeremia
3 Bokin'ny Fitomaniana
4 Bokin'i Ezekiela sy i Ezekiela
5 Bokin'i Daniela sy i Daniela
6 Ny Bokin'i Baroka
Bokin'i Isaia sy i Isaia[hanova | hanova ny fango]
Ny mpaminany Isaia
Ny Bokin'i Isaia, na Bokin'i Izaia, dia mamahavaha indriondra ireto lohahevitra ireto: ny maha-tokana an’Andriamanitra (monoteisma), ny faharavan'i Babilôna sy i Tiro, ny fanantenana ny Mesia mpanjaka ary ny Andro farany. Manasongadina ny halehibe amam-boninahitr’Andriamanitra izay manerana izao rehetra izao sy ny maha tompon'ny Tantara sy ny Zavaboary an'Andriamanitra koa io boky io. Io boky io dia miresaka momba ny fahababoan'ny Jiosy tany Babilôna sy ny niverenan’izy ireo tamin'ny taniny ary ny nananorenana indray ny Tempoly tao Jerosalema araka ny baikon’ny mpanjaka Kirosy (na Sirosy). Ny Jiosy dia manasokajy ny Bokin'i Isaia ao amin'ny mpaminany taoriana na mpaminany farany (hebreo: נביאים אחרונים / Nevi'im aharonim).
I Isaia (na Izaia) kosa, izay lazain'ny lovantsofina fa nanoratra ny boky, dia mpaminany niaina tokony teo anelanelan'ny taona 766 sy 701 tal.J.K. Mponin'i Jerosalema i Isaia. Niasa tamin'ny vanimpotoana nanombohan'ny Asiriana nanafika matetika miankandrefana izy, indrindra fa tamin'ny nanjakan'i Ahaza (mpanjakan'i Jodà) sy ny zanany nandimby azy ary tamin'ny andron'ny mpanjaka Hezekia (na Ezekiasa).
Bokin'i Jeremia sy i Jeremia[hanova | hanova ny fango]
Ny mpaminany Jeremia mampanao sora-tononina, sary nataon'i Gustave Doré.
Ny Bokin'i Jeremia dia mitantara ny fotoana mahatsiravina taloha kelin'ny hadravan'ny Babiloniana ny Fanjakan'i Jodà sy ny nahatanterahan'izany. Manambara hatrany ny hafatr'Andriamanitra ny mpaminany Jeremia ny amin'ny hamaizany an’i Jodà. Tsy i Jodà ihany anefa no hofaizin'Andriamanitra fa ireo firenena izay nifandimby niady sy nampijaly ny vahoakany koa. Nefa tetsy an-kilany dia nampanantena Andriamanitra fa hitondra ny vahoakany hiverina any an-tanindrazany indray andro any, ka amin'izany andro izany dia hanao "Fanekena vaovao" aminy. Betsaka ny Jiosy natao sesitany nefa nisy ihany koa ireo nijanona tao Palestina teo ambany fanaraha-mason'ny solonten'i Babilona. Ny Jiosy dia manasokajy ny Bokin'i Jeremia ao amin'ny mpaminany taoriana na mpaminany farany (hebreo: נביאים אחרונים / Nevi'im aharonim).
I Jeremia, izay lazain'ny lovantsofina fa nanoratra ny Bokin'i Jeremia sy ny Bokin'ny Fitomaniana, dia mpaminany tao amin'ny Fanjakan'i Jodà. Mbola tanora izy no nantsoin'Andriamanitra hitondra ny teniny tamin’ny andron'ny mpanjaka Josia. Fotoan'ady teo amin'ny firenena maro ny andro niainan'i Jeremia. Niaritra fahoriana i Jeremia nefa nanamafy ny fifaneraserany tamin'Andriamanitra izany. Nanatrika ny faharavan’ny Fanjakan'i Jodà sy ny fandoroana ny Tempoly ary ny fanaovana sesitany ny ampahany amin'ny mponin'i Jerosalema koa izy. Tamin'ny fotoan' ny fahababoana dia nisafidy ny hitoetra tao Palestina i Jeremia nefa noho ilay Kaldeana solontenan'ny fanjakana babiloniana nisy namono tao Jerosalema dia niaraka tamin'ireo Jiosy nandositra tany Egipta izy ka tany no mety nahafatesany.
Mitomany ny faharavan'i Jerosalema i Jeremia, sary nataon'i Rembrandt, 1630.
Ny Bokin'ny Fitomaniana dia mirakitra tonon-kiram-pisaonana lava narafitra amin'ny fomba kanto no ao anatiny, izay mamisavisa ny fahoriana lehibe vokatry ny fahirano sy ny fandravana an'i Jerosalema sy ny Tempoly. Ireo rehetra ireo dia fisehon'ny famaizan'Andriamanitra noho ny fahotan'ny vahoaka sy ny mpaminany ary ny mpisorona. Ny lovantsofina dia amanao an'i Jeremia ho nanoratra ny Bokin'ny Fitomaniana nefa ny fikarohana ankehitriny dia mitsipaka izany. Tsy manasokajy ny Bokin'ny Fitomaniana ao amin'ny bokin'ny mpaminany (hebreo: נְבִיאִים / Nevi'im) ny Jiosy fa ao amin'ny atao hoe Soratra (hebreo: Ketûvim / כְּתוּבִים).
Bokin'i Ezekiela sy i Ezekiela[hanova | hanova ny fango]
Ny mpaminany Ezekiela, sary nataon'i Michelangelo (1510) ao amin'ny lasapely Sixtine.
Ny Bokin'i Ezekiela dia bokim-paminaniana milaza fitsarana sy fandrahonana ny Israelita raha mbola tsy rava ny Fanjakan’i Jodà, sady faminaniana ny amin'ny fanamelohana ireo firenena mpampahory ny vahoakan'Andriamanitra sy ny amin'ny hiverenan'ny voninahitr'i Israely. Ho tsaraina amin'ny asa nataony avy ny olombelona tsirairay sady hisy ny fitsanganan'ny maty ho velona. Haorina fanindroany ny Tempoly. Ny Jiosy dia manasokajy ny Bokin'i Ezekiela ao amin'ny mpaminany taoriana na mpaminany farany (hebreo: נביאים אחרונים / Nevi'im aharonim).
I Ezekiela dia mpisorona sy mpaminany tao Jerosalema izay nentina natao sesitany tany Babilonia niaraka tamin'ireo Jiosy hafa avy any Jodà tamin'ny fotoan'ny Fahababoana, tany amin'ny taonjato faha-6 tal. J.K. Nofidin'Andriamanitra ho mpaminany ho an'ireo babo tany Babilona sy ireo sisa tavela tao Jerosalema i Ezekiela. Nanomboka tokony ho tamin'ny taona 597 tal. J.K. nandritra ireo taona faramparan'ny Fanjakan’i Jodà ny asa faminaniany. I Ezekiela dia ataon'ny lovantsofina jiosy ho nanoratra ny Bokin'i Ezekiela. Ny mpikaroka sasany dia milaza fa tsy olon-tokana no nanoratra io boky io fa olona maro tamin'ny fotoana samihafa.
Bokin'i Daniela sy i Daniela[hanova | hanova ny fango]
I Daniela ao an-davaky ny liona, sary nataon'i Peter Paul Rubens.
Ny Bokin'i Daniela na Bokin'i Daniely, amin'ny tapany voalohany, dia mitantara ny amin'ny zatovolahy hebreo efatra izay samy avy ao amin'ny fanjakan’i Jodà, indrindra fa i Daniela (na Daniely), izay lasa babo avy tany Jerosalema ka nasesitany tany Babilonia tamin'ny taona 606 tal. J. K. Lasa mpiasam-panjakana tao Babilona i Daniela sy ireo namany telo rehefa hitan'ny mpanjaka ny fahendreny. Tsy nivadika tamin’ny finoana an’ Andriamanitra anefa izy ireo na dia teo ny fanerena samihafa nahazo azy mba hanompo sampy ary na saika ho namoizany ny ainy aza izany. Amin'ny tapany faharoa ny boky dia mitantara ny fahitana maro izay nasehon'Andriamanitra an'i Daniela sy ny hevitr'ireo fahitana ireo araka ny nambaran'ny anjely taminy. Ny boky manontolo dia maneho ny fifehezan'Andriamanitra ny tantaran'ny zanak'olombelona sy izao tontolo izao. Tsy manasokajy ny Bokin'i Daniela ao amin'ny bokin'ny mpaminany (hebreo: נְבִיאִים / Nevi'im) ny Jiosy fa ao amin'ny atao hoe Soratra (hebreo: Ketûvim / כְּתוּבִים).
I Daniela dia mpaminany israelita malaza eo amin'ny fivavahana jiosy sy kristiana. Nanohy ny asany tao amin'ny fanjakana Persiana izy taorian'ny naharesy ny Babiloniana. Ny lovantsofina jiosy dia manao an'i Daniela ho nanoratra ny Bokin'i Daniela.
Ny Bokin'i Baroka[hanova | hanova ny fango]
I Baroka, sary nataon'i Gustave Doré, taona 1866.
Ny Bokin'i Baroka dia tsy isan'ny boky kanonikan'ny Baiboly hebreo (Tanakh) sy ny Baiboly protestanta izay manao azy ho boky apokrifa. Boky deoterokanobnika ny Bokin'i Baroka amin'ny Katolika sy ny Ortodoksa. Ahitana fandinihana ny amin'ny teolojia sy ny tantaran'i Isiraely, ady hevitra momba ny fahendrena, sady teny nampitaina tamin'ireo mponin'i Jerosalema sy ireo any am-pielezana. Ahitana fieken-keloka sy fampanantenam-pahafahana ho an'ireo mifona noho ny fahotany ary vavaka fifonana amin'Andriamanitra sy fiderana azy ihany koa ny ao amin'io boky io. Avy eo ilay boky dia midera ny fahendrena sy ny didin'Andriamanitra, ary miantso ireo Jiosy any am-pahababoana mba hahery sy hionona. Ahitana taratasy lazaina hoe nalefan'i Jeremia ho an'ireo Jiosy natao sesitany any Babilona izay taratasy fampitandremana amin'ny fanompoan-tsampy koa ny ao amin'io boky io.
I Baroka na Baroka zanak'i Neria no ataon'ny lovantsofina ho nanoratra ny Bokin'i Baroka. Israelita tao amin'ny fokon'i Jodà i Baroka, mpianatr'i Jeremia izy. Nitory teny i Baroka tokony tamin'ny taona 606 tal. J.K. Nentina niaraka amin'i Jeremia tany Tafnesy any Egipta i Baroka taorian'ny namonoan'ny olona ny governora Godoliasa izay notendrena ho governoran'i Jodea taorian'ny nahababoan'i Nabokôdônôzôra (na Nebokadnezara) an'i Jerosalema tamin'ny taona 586 tal. J.K. Rehefa maty i Jeremia dia nankany amin'ny Jiosy babo tany Babilona i Baroka. Tao no namoahany ireo faminaniany tao amin'io boky mitondra ny anarany io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpaminany_lehibe&oldid=978506"
Voaova farany tamin'ny 15 Desambra 2019 amin'ny 14:00 ity pejy ity.